रवि लामिछाने भन्दा देशको कानुन तल छ सरकार ? | News Nepal
अहिलेको अवस्थामा प्रेेस पास लिनु भन्दा जुत्ता पालिस गर्दा गाैरवको अनुभूति गर्छु
काठमाडाैं ७, असार । बजारमा अहिले एउटा कुराले खुवै चर्चा पाइरहेको छ । त्यो हो न्युज २४ का पत्रकार रवि लामिछानेले चलाउने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासंग’ विवाद प्रकरण ।
घटनाको सुरुवात भने लक्ष्मण बिकको निवेदनले गराएको हो । नुवाकोटका बिकले गत माघ २७ गते प्रेस काउन्सिलमा रवि लामिछानेविरुद्व विना अनुमति व्यक्तिको कार्यकक्ष र घरमा घुसी अनर्गलरुपमा भ्रामक समाचार बनाउनु र भिजुअल खिच्ने र आम सीधा सादा जनतालाई दुःख दिने काम गरेका आरोपसहित कारवाहीको माग गरिएको छ ।
रवि लामिछाने अहिले चाैतर्फि विवाद र चर्चाको विषय बन्न पुगेका छन् । आम रुपमा मानिसहरु उनको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । लामिछाने फेसबुक लाइभमा आएर आफ्ना कुरा एक तरिकाले राखिरहेका छन भने प्रस काउन्सिललाई दिएको जवाफ भने अलि धम्कीपूर्ण तरिकाको छ ।
नेपाल एक सार्वभाैमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । देशको आफ्नो कानुन छ, विधि छ, विधान छ यसर्थ सार्वभाैमिकता भन्ने कुरा सानो ठूलो भन्ने नै हुदैन । पुरातनवादी राजनीतिशास्त्रीहरुले कल्पना गरेको राज्यमा समेत स्वच्छ समबृद्व राज्यको मार्ग निर्देश गरिएको छ भने आजको युगमा राज्यको अस्तित्वमा कुनै किसमको खेलवाड हुने कुरै हुदैन ।
विदेश जान पाइन्छ । नेपाली नागरिकता नत्यागेर पनि विदेशमा बस्न पाउने प्रावधान छ। विदेश गएर काम गर्नका लागि नागरिकता त्यागु पनि पर्दैन ।
तर, लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएर उनी अमेरिकी नागरिक समेत बनिसकेका छन् । उनलाई अमेरिकाले अमेरिकी राहदानी समेत उपलब्ध गराएको छ । उनको राहदानी ५१२९६६९८१ नम्बरमा जारी भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।
अध्यागमन विभागको पत्रः
उनी नातेदार भिषामा नेपाल आएका हुन् । अध्यागमन विभागको पत्रमा जनाएअनुसार ४ अक्टोबर २०१८ सम्म अवधि रहेको भिषा (गैर पर्यटक) नातेदार भिषामा नेपाल बस्न अनुमति दिइएको छ ।
यस्तै, पत्र अनुसार रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिक भएकाले नेपालमा नातेदार भिषामा रहेको र अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा २० को (१) अनुसार पारिश्रमिक लिएर वा नलिएर कुनै पनि उद्योग, व्यापार, व्यावसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट लेखेको छ ।
आखिर यसो हो भने रवि लामिछानेले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्छ या पर्दैन त्यो कानुनले नै व्याख्या गर्ला तर पत्रकारिताको भेषमा जे पनि गर्न हुने भन्ने विल्कुलै होइन।
पत्रकारिताका पनि आफ्नै मुल्य, मान्यता, सिद्वान्त र प्रचलन हुन्छन । पत्रकारिता भनेको ढाल बनाएर गोलि हान्ने अस्त्र पनि होइन । पत्रकारिता विशुद्व सेवा, पेशा हो जसको माध्यमले आम मानिसले आफ्नो रुचि अनुसारका कुराहरु जान्ने सुन्ने र पढ्ने माैका पाउँछन् ।
रवि लामिछानेले लेखेको पत्र र उनको रवैयाः
लामिछानेले आफू पत्रकार भइनसकेको भनेर भन्दै गर्दा एक पटक ‘पत्रकार’ को परिभाषा अध्यन गरेर मात्रै यी यस्ता कुराहरु बोल्न आवश्यक हुन्छ किनकी उनी नेपाली मिडियाका एक आइकन जस्तै बनिसकेका छन् । उनको कार्यक्रको प्रस्तुतिपनि खेद जनक छ भन्न नमिल्ला तर उनले अपनाएको बाटो गलत भएको भन्न त सकिला नि ।
उनले लेखेको पत्रः
उनले आफूले श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिएको भनेका छन् । तर, प्रेस पास लिनु भन्दा दोबाटोमा जुत्ता पालिस गरेर बस्दा आफू गाैरव महसुस गर्ने भनेर उनले ठाडो चुनाैति समेेत दिएका छन्।
उनले आफूसँग अमेरिकी पासपोर्ट रहेको जवाफी पत्रमा स्वीकार गरेका छन् । तर, त्यो अमेरिकी पासपोर्ट फिर्ता गर्ने प्रोसेसमा रहेको उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
उनले श्रम मन्त्रालयबाट श्रम अनुमति लिएका छन त ?
श्रम मन्त्रालयको रिपोर्टमा लामिछानेले कुनै किसिमको श्रम स्वीकृति नलिएको भनेर पत्राचार गरेको छ । अब नेपाल सरकारलाई आधिकारिक मान्ने की रविलाई ?
यदि रविलाई मान्ने हो भने त्यो नेपालको नागरिक ठहर्दैन र नेपाल सरकारलाई मान्ने हो भने गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नु पर्छ ।
तर, पत्रकारलाई समयमा तलब खुवाउन नसक्ने र आफैं कमाएर खानुपर्ने गरिब मिडियामा काम गरेकै भरमा लामिछानेले अब अमेरिकी सरकारको ऋण तिर्न सक्लान् ?
लामिछानेको आर्थिक आयआर्जनको स्रोत के हो ? प्रेस काउन्सिलका एकजना सदस्य भन्छन्- अरुको रौंचिरा खोतल्दै हिँड्ने लामिछानेको विषयमा जनमानसमा यस्ता प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हुँदैन । र, यस्ता प्रश्न उठाउनेहरुलाई गाली नगरिकन लामिछानेले नम्र भाषमा जवाफ दिएको खण्डमा मात्रै उनले अमेरिकामा सभ्यता सिकेर आएका रहेछन् भनेर मान्न सकिन्छ ।